Ukulingana kweemodeli ze-thermomix TM5, TM31 kunye ne-TM21 | ThermoRecipes
Ukulingana phakathi kweemodeli zeThermomix: TM5, TM31 kunye ne-TM21
NgoSeptemba 2014 iVorwerk yasungula imodeli yayo entsha eyaziwa njenge TM5. Abasebenzisi abaninzi bebeyifumana kwiminyaka edlulileyo kwaye abanye ebebenemodeli ezindala bebezihlaziya. Nangona kunjalo, njengoko aba matshini banobomi obude obuluncedo, baninzi abaqhubeka nokupheka kwifayile ye- TM31 (yenziwe ngo-2004) kwaye, kancinci kancinci, nge TM21 (yenziwa ngo-1996). Ngaba uyafuna ukupheka ngazo zonke iimodeli? Ewe kubalulekile ukuba uyayazi i- Ukulingana kweemodeli zeThermomix TM5, TM31 kunye ne-TM21.
Ke ikhona njani Umahluko omncinci Phakathi kwe-TM5 kunye ne-TM31, sicinge ukuba kuluncedo ukubhala inqaku elichaza umahluko ophambili phakathi kweerobhothi ezi-3 ukuze ube nemodeli onayo, ungaqhubeka nokonwabela iiresiphi zethu kwaye uzilungelelanise ngokupheleleyo intuthuzelo kwaye ngaphezu kwako konke, khu seleko.
Ukulingana phakathi kwe-TM31 kunye ne-TM5
I-Thermomix TM31 vs Thermomix TM5
Umahluko phakathi kwezi modeli zimbini mncinci kakhulu kunalawo uphakathi kwama-31 nama-21, ke kuya kuba lula kakhulu ukulungelelanisa iiresiphi zakho. Kuya kufuneka uthathe ingqalelo kwizinto ezimbini ezisisiseko kuphela: Ubushushu obuphezulu kunye Umthamo weglasi kunye nesikhongozeli se-varoma. Makhe siyibone ngokweenkcukacha:
Obona bushushu buphezulu be-TM5 bungaphezulu kwe-120º, ngelixa i-TM31 ifikelela kwi-100º kuphela. Oku kuvula uluhlu lwezinto ezinokwenzeka nge-TM5, ngakumbi xa kusenziwa ukuhanjiswa kunye nokunyanzeliswa.
Sautéed kwaye sautéedkwi-TM5 kufuneka sisebenzise i-120º kunye nemizuzu esi-8. Ngelixa sikwi-TM31 siza kubeka iqondo lobushushu le-varoma, imizuzu eli-10. Ngoku nge-TM5 i-stir-fries ibhetele, igolide ngakumbi. Kuqapheleka ikakhulu xa susa igalikhi, umzekelo, ukuyigalela ngaphezulu kwentlanzi etshisiweyo.
Ubushushu beVaroma: Kwi-TM31 sisebenzisa i-Varoma iqondo lobushushu kuyo yonke into: ukubila nge-varoma, ukuvusa-uqhotse kunye nokugawula, ukunciphisa ulwelo kwiisosi ... Nangona kunjalo, kwi-TM5 kufuneka sisebenzise ubushushu be-varoma ukwenza umphunga nokupheka ngaphakathi isitya se-varoma okanye ukunciphisa iisosi.
Pheka ngo-100º: Njengakwi-TM31 nge-TM5 sinokupheka imifuno nge-100º, umzekelo, ngaloo ndlela sithanda ukugcinwa kwepropathi yokutya okanye irayisi, eya kuhlala kwindawo efanelekileyo yokupheka.
Umthamo weVaroma inyuke nge-10%, ukusuka kwiilitha ezi-3 ze-TM31 ukuya kwi-3.300 ye-TM5.
Itanki ikwonyuse umthamo wayo ukusuka kwiilitha ezi-2 ze-TM31 ukuya kwi-2.200 ye-TM5. Apha kuya kufuneka ulumke njengoko iiresiphi ze-TM31 zinokwenziwa ngokugqibeleleyo kwi-TM5, kodwa hayi ngenye indlela kuba iglasi inokuphuphuma. Ke ukuba ufuna ukwenza iresiphi ye-TM5 kwi-TM31, Qiniseka ukuba owona mqondiso ubuninzi awugqithi (Iilitha ezi-2).
I-Varoma ikwandisile ukubanakho kwaye oku kuhle kakhulu njenge singafaka okunye ukutya ukuze sibapheke ngaxeshanye kwaye zikhululekile kunezinye, zithanda ukuhamba kakuhle komphunga. Umzekelo, ngoku sinokubeka i-seabass ezimbini okanye i-bream ngendlela elula ngakumbi okanye imifuno engaphezulu. Kukwaluncedo xa ubeka uxande oluxande okanye umntu ngamnye kwimiphunga okanye iipuphu kuba iimodeli ezininzi ziya kungena kuthi.
Ndikunye ne-TM5 isantya se-10 okanye i-turbo inyukile yonke indlela eya kwi-10.700 rpm (ngelixa i-TM31 yafikelela kwi-10.000). Oku kwenza amalungiselelo afana ne-gazpacho okanye ii-creams zincinci ngexesha elincinci.
Masiyibone etafileni ngokomzobo.
Itheyibhile ye-TM31 kunye ne-TM5 efanayo
Ukuthambisa ngebhasikidi kunye / okanye ngevaroma Ubushushu beVaroma Ubushushu beVaroma
Ubushushu beVaroma Ubushushu beVaroma
Saute okanye usile Ubushushu beVaroma-10 min approx Ubushushu 120º - 8 min approx
Ubuninzi bobungakanani. ye iglasi 2 litros 2,200 litros
Ubuninzi bobungakanani. ye varoma 3 litros 3,300 litros
mariposa Ubukhulu kwisantya 5 Ubukhulu kwisantya 4
Turbo (okanye isantya 10) Ifikelela kwi-10.000 XNUMX ngomzuzu Ifikelela kwi-10.700 XNUMX ngomzuzu
Ukulingana phakathi kwe-TM31 kunye ne-TM21
Nantsi itheyibhile yokulingana apho kufuneka ulandele umqolo ohambelanayo, oko kukuthi, ukuba iresiphi elungiselelwe i-TM31 ithi "ispeed speed" kwaye une-TM21, into ekufuneka uyenzile kukukhawulezisa inkqubo 1 nebhabhathane… kulula, akunjalo?
Ngoku unesitshixo soku lungisa zonke iiresiphi kwimodeli yakho ye-TM21.
Itheyibhile yokulingana phakathi kwe-TM31 kunye ne-TM21
Isantya sebhakethi Isantya 1 nebhabhathane
Jika uye ekhohlo mariposa
Ubushushu 37º Ubushushu 40º
Ubushushu 100º Ubushushu 90º
Ukucanda, isantya 4 Chop, isantya 3 okanye 3 1/2
Grate, isantya 5 Grate, isantya 4
Ukukrazula, ukukhawuleza 7 ukuya ku-10 Ukukrazula, ukukhawuleza 6 ukuya ku-9
Benyuka abamhlophe, isantya 3 1/2 Khwela kucace, isantya 3
Njengoko uza kubona, kukho umahluko obonakalayo phakathi kweemodeli 21 kunye ne-31, ezinje ngobushushu obuncinci okanye isantya semisebenzi esisiseko yokusika, ukuthambisa kunye nokutshiza.
Uncedo olutsha eThermorecetas! Phumelela iincwadi zethu kunye ne- € 50 eAmazon